Ka faa´iideyso fursadan: Ma u baahantahay in lagaa caawiyo dhisida luuqada Norwiijiga ama inaad korsato aqoonteeda? - NorSom News
Home Nyheter/Warcusub Utdanning/Waxbarasho Ka faa´iideyso fursadan: Ma u baahantahay in lagaa caawiyo dhisida luuqada Norwiijiga...
Hadii aad u baahantahay in lagaa caawiyo dhisitaanka naxwaha luuqada afka Norwiijiga ama aad isku diyaarineyso imtixaan af-norwiiji ah, waxaad caawin iyo waxbarasho bilaash ah aad ka heli kartaa bydel Gamle Oslo oo fursad lacag la´aan siinayo dadka aqoon kororsiga afka Norwiijiga caawinta uga baahan.
Fursadan ayaa waxaa loogu talagalay dhalinyarada, ardeyda iyo dadka kale ee raba inay kordhisadaan aqoontooda afka Norwiijiga. Waxaana uu bixi doonaa maalmaha Talaadada iyo arbacada, inta u dhaxeyso 17:30 ilaa 20:30.
Marka ugu horeeyo ee uu qofku iska diiwaan galiyo waxbarashada, waxaa laga qaadi doonaa imtixaan lagu qiimeynayo heerka uu joogo, kadibna waxaa laga caawin doonaa mowduucyo kala duwan, iyada loo eegayo heerka uu markaas joogo.
Macalimiinta koorsooyinkan bixin doono ayaa ah ardey soomaali ah oo dhigata jaamacada Oslo.
Adresska goobta waa Platous gate 14 v/ Bydel Gamle Oslos servicetorg.
Wixii faahfaahin ah ama hadii aad su´aal qabto kala xiriir: 486 57 680.
Previous articleDagbladet: Xisbiyada mucaaradka oo isku raacay in Listhaug laga qaado awooda amar siinta hey´adda UNE
Next articleQareen A. Mohammad: Qoyskaaga waad u dacwoon kartaa, hadii aad halmar taageero dhaqaale ka heshay dowlada.